သင်ဒီမှာပါ: နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> ဂဟေရေးစခန်းများ -> ဂဟေဆက်စခန်း
ငါတို့သည်သင်တို့၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်ချင်ပါတယ် Taiwan ဂဟေဆက်စခန်း ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူများနှင့်စက်ရုံ။ သင်သည်ငါတို့ထုတ်ကုန်မဆိုစတိုင်များကိုစိတ်ဝင်စားပါက, မှအခမဲ့ခံစားရကိုကျေးဇူးတင်ပါ ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလက်ကားအရောင်းဆိုင်, ဖြန့်ဖြူး, ဝယ်လက်, အေးဂျင့်များနှင့် OEM / လိမ္ထံမှ Enquiry ကြိုဆိုလျက်ရှိကြ၏။
ငါတို့ရှိသမျှသည်အမိတ်ဆွေများနှင့်အတူရိုးသားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများဆန္ဒနှင့်ဘုံဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ပိုပြီးဘုနျးကွီးသောနက်ဖြန်နေ့ကိုဖန်တီးရန်အတူတကွအလုပ်လုပ်ကြသည်။ ငါတို့သည်လည်းပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပ '' မိတ်ဆွေများထံမှအဖိုးတန်အကြံဥာဏ်များနှင့်အကြံပြုချက်များကိုလက်ခံရရှိရန်မျှော်လင့်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကိုဒီအတွက်အကောင်းအောင်မြင်မှုများဖန်တီးပါစေ
မြင့်မားတဲ့ကြိမ်နှုန်းပရော်ဖက်ရှင်နယ် 120W ဂဟေဘူတာ
အများအပြားဖောက်သည်များကချီးကျူ​​းထောပနာ 1. Hot ရောင်းချမော်ဒယ်။
2. Excellent ကအပူနာလန်ထူ။
LF-3200 သူတို့ရဲ့ကွောကျဘှယျသောအပူစီးကူးသည် 44-413081 စီးရီးအကြံပေးချက်များကို အသုံးပြု. အကောင်းဆုံးအပူနာလန်ထူကယ်တင်တတ်၏။
ကို C ခန့်သည် 500 °ဖို့အချိန်ထလော့။ 13 စက္ကန့်ပိုမြန်နှင့်ပျဉ်းအပူချိန်ကျဆင်းစဉ်ဆက်မပြတ်အလုပ်စဉ်အတွင်းလျှော့ချဖြစ်ပါတယ်။
မိုဘိုင်းဖုန်းများပြုပြင်သည် 1 ။
မှတ်စုစာအုပ် / လက်ပ်တော့ / ကွန်ပျူတာများပြုပြင်သည်2။
game consoles စပြုပြင်သည်3။
အခြားမည်သည့် mainboards ပြုပြင်သည်4။
rework စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေရန် soldering ခင်ချစ်ပ်သို့မဟုတ် mainboards preheating သည် 5. ။
200º-500ºကို C (302º-896º F)